Isandla somatshini wokutsala ukhula ngesandla sisebenzisa ukuthengisa
Kwi-paddy irayisi ekhula ,Ukulawula ukhula linyathelo elibalulekileyo lokuthintela ilahleko kwiindleko zesivuno kunye nemveliso, kunye nokugcina umgangatho wokudla okuziinkozo. Ukulawulwa ngqo kokhula kunokwenziwa ngokulukhula ngesandla, Ukutsala ukhula kusetyenziswa izixhobo ezifana nokutshabalalisa ukhula ngesandla kunye nokutsala ukhula kwimiqolo.
Esi sandla somatshini wokutyala eseludongeni kufanelekile ekutsaleni ukhula lwerayisi.Ngaphandle kokusetyenziswa kwento yokubulala ukhula, kunganciphisa ungcoliseko kwindalo kwaye kuthintele ukubumbana komhlaba. Umatshini osebenza ngokutsala ukhula ngumatshini wokutyala irayisi e-organic,lincinci ngokobukhulu, ukukhanya kwisisindo, kulula ukushukuma ,ezoqoqosho kwaye ziluncedo ekulimeni.
Iimpawu zomsantsa weedydydi yesandla
1.Lo matshini wokhula ngezikhondo unokusebenza ukhula kumhlaba wedreydi yerayisi.
2.Ukhula olusebenzayo oluphezulu, ilungele amathafa, iinduli, ithambeka, Unxantathu kunye neminye imihlaba encinci yodaka.
3.Umatshini wokutsala ukhula ngokobukhulu obuncinci kunye nobunzima,kulula ukusebenza kunye nokugcina,Kulula ukushukuma kwaye kuqoqosho kwaye kuyasebenza.
4.Isikali sokutsala sinzulu kwaye sinzulu, i-engile iyahlengahlengiswa, isengqiqweni, kwaye owona mda uphezulu uyahambelana nokusetyenziswa kwabasebenzi.
5.Umatshini ungenza ukhula lomqolo kwaye ungalimi emasimini.Ngaphezulu ukonga abasebenzi ngaphezu kokutsalwa kwemveli, tyhala ukuze uhambe ungazibeki esintlungwini. Nangona umatshini wokutsala ukhula ulula, inezinto ezininzi zobugcisa.
6.Zibe sisixhobo esifanelekileyo sokutyala irayisi.
Umatshini osetyenziselwa ukhula kusetyenziswa iikharamu zobuchule
Ukusebenza ububanzi 15i-CM
Ubunzulu bokusebenza 12~ 20cm
Bamba banzi 45i-CM
Ubungakanani bomatshini 1.87*0.45*1.1m
Ubunzima bomatshini 6kgs